Do inynnyo mnyhnylnylny inonny ny solnyr eny an-dalana lnymp izany? - Ynyngzhou Lnyngxu Lighting teknolojia Co., Ltd.
Fitsipiky ny rafitra, ny fotokevitra niasa rafitra dia tsotra, mampiasa ny fitsipiky ny fotovoltaika fiantraikan'ny sela solar, takelaka solar mandritra ny andro hahazoana ny taratra masoandro ary nadika ho amin'ny famokarana herinaratra, taorian'ny fitehirizana ny bateria fitahirizana sy ny fandroahana ny mpanodina, ny alina rehefa nanazava ny hazavana. mihena tsikelikely ho eo amin'ny 10 lux, ny takelaka solar manodidina ny volavolan-jotra misokatra ho an'ny 4.5 V, ny fiampangana sy ny fanaraha-maso ny fitrandrahana ny vidin'ny volan'ny hetsika, ny bateria handroaka ny jiro. 8 ora aorian'ny fandefasana bateria, fiampangana sy fandefasana hetsika fanaraha-maso, fahataperan'ny bateria. Ny fiasa lehibe amin'ny fiampangana sy ny mpanalefaka ny fiarovana dia miaro ny bateria.
Rafitra famokarana herinaratra:
Amin'izao andro antoandro izao, ny cellule sela misy masoandro dia mamorona hery elektrôriôma vitsivitsy ao ambanin'ny hazavana, ary mamorona ny fantsom-baravarankely sela amin'ny alàlan'ny fifandraisan-davitra sy mifanitsy amin'ireo modules, mba hahafahan'ireo volavolan-tsolika mitongilana amin'ny alàlan'ny volavolan-tsofina fametrahana rafitra . Avy eo arotsaho ny bateria amin'ny alàlan'ny famandrihana sy ny fandefasana fantsom-bidy mba hitahiry ny angovo niovaina avy amin'ny angovo maivana. Amin'ny hariva, ny vondrona bateria dia manome herinaratra fampidirana ho an'ny mpanova. Amin'ny alàlan'ny fiasan'ny inverter, ny fiovam-po mivantana dia avadika ho lozisialy ankehitriny ary nafindra tany amin'ny kabinetra fitsinjarana herinaratra, izay ifandimbiasan'ny fampitaovana ny herinaratra. Ny fanalefahana ny bateria dia tantananan'ny mpandrindra mba hahazoana antoka ny fampiasana ara-dalàna ny bateria. Ny rafi-pamokarana herinaratra Photovoltaic dia tokony ho voafetra ihany koa fiarovana sy fitaovana fiarovana amin'ny tselatra, hiarovana ny fitaovana momba ny rafi-pitondran-tena amin'ny alàlan'ny fampandehanana entana ary avy amin'ny fitokonana tselatra, mba hitazomana tsara ny fampiasana ireo fitaovana rafitra.
Ny tombony azo amin'ny jiro an-dalambe masoandro: yijia photoelectric
1. Jiro an'ny arabe an'ny masoandro dia MANAO sela fotovoltaik'i solar hanome angovo herinaratra. Satria karazana angovo vaovao maitso sy mahavelona dia ny "angovo solar" "tsy manam-pahataperana". Ny fampiasana tanteraka ny angovo azo avy amin'ny masoandro dia zava-dehibe tokoa hanamaivana ny tsy fahampian'ny angovo mahazatra.
2. Ny fametrahana ny jiro an-dalambe solar dia tsotra sy mora, ary tsy ilaina ny mametraka tariby sy ny tetikasa marobe toy ny jiro mahazatra eny an-dalambe. Ny fizarana rehetra sy ny fifehezana rehetra dia napetraka ao anaty bracket jiro mba hamoronana manontolo.
3. Ny vidin'ny fandidiana sy ny fikojakojana ny jiro an-dalambe solar. Ny herin'ny jiro ampiasain'ny jiro solar dia saika tsy misy farafara, afa-tsy amin'ny ampahany kely amin'ny vidin'ny herinaratra vokatry ny fiovam-po avy amin'ny andro feno orana sy orana mankany amin'ny famatsiana herinaratra ao an-tanàna. Ny rafitra fiasan'ny rafitra manontolo dia fanaraha-maso mandeha ho azy, tsy misy fitsabahan'ny olombelona, ​​ary saika tsy misy vidiny fikolokoloana izany.